3 Ụdị ụdị SEO dị ka ọkachamara site na ọkachamara dị elu
Ndị mmadụ na-etinye oge dị ukwuu n'ịgụ banyere SEO abụghị ihe ọhụrụ maka iche iche SEO kachasị mma. Ụfọdụ ndị na-eji SEO dịka mgbasa ozi ahịa. Dabere na usoro eji ya ma ọ daa na agba, oji, ma ọ bụ isi awọ. Dabere na mmelite Google na-adịbeghị anya, otu ga-achọpụta na site na ugbu a, nanị SEO ghọtara bụ usoro ejiji ọcha. Ihe kpatara ya bụ na ndị ọzọ abụọ na-achọ ịmalite ịdọrọ algọridim iji bulie saịtị dị elu na SERP - kurier transport. Iji gbochie ya na nsonaazụ ọjọọ, akpụkpọ anụ SEO na-eme ka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ hụ nsonaazụ kacha mma. Ide ihe edere ma na-enwe olileanya na ọ na-akwado ọkwa elu abụghị usoro.
Alexander Peresunko, otu n'ime ndị ọkachamara na - ahụ maka Semalt , na - akọwa ihe mere ọ dị mkpa iji nyochaa usoro SEO n'ọtụtụ ihe ize ndụ na ụgwọ ọrụ.
White okpu SEO
Google katọrọ iji ụlọ ejikọta ụlọ ma mee ka o jide n'aka na ọ nwere mmetụta ọjọọ na ogo. Otú ọ dị, ọ bụghị njikọ niile ejikọta ya. Ọ bụrụ na ndị ahịa na-agbaso iwu ha nwere na njikọ njikọ, a ka nwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ. N'ime ihe atụ nke okpu ọcha, usoro gụnyere ịnye oke ọdịnaya na mgbasa ozi ọha na eze, ụlọ njikọ njikọta, na ahịa ahịa email..
Oke okpu SEO siri ike ịnọgide na-akwụ ụgwọ ya. Ịkwụ ụgwọ ọtụtụ awa na-achọ ịkwalite ọdịnaya, ịchọta njikọ ndị gbawara, na ụlọ mmekọrịta ga-eri saịtị ahụ. Echiche ihu na saịtị ahụ nwere ntakịrị ihe ize ndụ nke Google ga - eme ka ọ gbasaa.
Ọkpụkpụ uhie SEO
Mgbe onye na-etinye ego na ego ọnụ, ha na-ebelata ihe ize ndụ zuru oke site n'ịgbalite mgbalị ha na-eme n'ọtụtụ ìgwè ma ọ bụ ụlọ ọrụ iji nweta ego ngwa ngwa, ma ka na-enwe ihe ize ndụ. Ọkara grey SEO gụnyere atụmatụ ụfọdụ Google na-akwadoghị iji mee ka usoro ogo ahụ dịkwuo elu. Ọdịda ala na nke a bụ na ọ na-eduga na penalization nke saịtị ahụ. Ihe atụ nke SEO isi awọ dịka ịzụta njikọ, ịzụta ihe ochie, na ịzụta ihe nnọkọ mmekọrịta. Google ekwughị n'ụzọ doro anya nnweta nke mmekọrịta mmekọrịta ebe ọ bụ na echiche ahụ bụ iji jikwaa SERPs.
Nwa ojii SEO
Black hat SEO bụ mgbe akara markụchara akụkụ niile ma were obere oge iji meziwanye ọnọdụ saịtị. Otú ọ dị, dịka akwụkwọ penny nile, enwere ike ịkwụsị uru niile. Ya mere, ọtụtụ n'ime ụzọ ejiji ojii ndị a nwere ike iduga na Google na-edebanye aha na saịtị niile ahụ. Naanị nwaa ịchọrọ nwa oji na saịtị nke mmadụ anaghị eche dịka ihe bara uru.
Ụzọ 301 redirect bụ nke a kachasị enwekarị kemgbe afọ 2014. Ebumnuche n'azụ ya bụ ịbawanye okporo ụzọ site na iji ọdịnaya dị ala, nchịkwa saịtị, na ịkọwa ngalaba 20-30 na saịtị ahụ. Mgbe mmadụ kụrụ aka, wuo ngalaba ọzọ ma gbanwee ya na ndị dịnụ. Ọ bụ ezi echiche ruo mgbe ejidere mmadụ. Ọzọkwa, ịzụta netwọk netwọk mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ ọkpụkpụ ọzọ.
SEO dị mma
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-enwe ahụmahụ na ụdị SEO atọ ahụ. Usoro nke ọ bụla dabere n'ihe mgbaru ọsọ nke onye nwe ụlọ ahụ. Dịka itinye ego, onye nwe saịtị ga-ebu ụzọ kpebie ihe mgbaru ọsọ ha chọrọ iji mezuo tupu ị na-ahọrọ otu atụmatụ SEO.